यी डा. दम्पत्तीको अनौठो प्रेम : सक्रंमितको उपचार गर्दै प्रेम बस्यो अनि विहे गरे, संक्रमितको सेवामै दंग छन् ! ‘बिरामी ब’चेर घर फर्काएको दिन ह’नि’मु’नवाला खुसी महसुस हुन्छ,’ गोमाले भनिन् ! - Buletin Nepal
यी डा. दम्पत्तीको अनौठो प्रेम : सक्रंमितको उपचार गर्दै प्रेम बस्यो अनि विहे गरे, संक्रमितको सेवामै दंग छन् ! ‘बिरामी ब’चेर घर फर्काएको दिन ह’नि’मु’नवाला खुसी महसुस हुन्छ,’ गोमाले भनिन् !
गोमा गा’इ’नो’को’लो’जि’स्ट हुन् । शिशिर एने’स्थे’सि’यन । उनीहरूको विशेषज्ञता एकअर्काको भन्दा फरक छ । तर परिस्थितिअनुसार परिपूरक बनेका छन् । गोमाले प्र’सू’ति गराउँदा शिशिरको धेरैपटक सहारा लिएको बताइन् । यहाँसम्म कि उनले गर्दा नै गोमाका अधिकांश ग’म्भी’र प्रकृतिका ग’र्भ’व’ती बचाउन सफल भएका छन् ।
कोरोना संक्रमित ग’र्भ’व’ती, उ’च्च र’क्त’चा’प र र’ग’त ब’ग्नेजस्ता ज’टि’ल प्रकृतिका समस्या आइपर्छ । यतिबेला आईसीयू हेर्ने शिशिरले बेलैमा साथ दिएर बिरामी बचाएको गोमाले बताइन् । ‘केही भइहाल्यो भने उहाँलाई नै भन्छु,’ उनले भनिन्, ‘बिरामीले नै हामीलाई एकसाथ बनाएका छन् ।’
अस्पतालमा को’भि’डका बिरामीको चा’प बढ्दो छ । स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति कम छ । अस्पतालको होस्टलमा बस्दै आएका उनीहरू अहिले पालैपालो ड्युटीमा खटिएका छन् । संक्रमितको उपचार गर्दागर्दै दुवै जना आफैं पनि संक्रमित भए । केही साता घरमै बसेर उपचार गरे ।
तर पीसीआर जाँच गराएनन् । सामान्य लक्षण देखिएकाले आफ्नो उपचार आफैं गर्दै बिरामीको सेवा गरिरहे । ‘पीसीआर गर्दा पोजिटिभ आयो भने १० दिन बिदामा बस्नुपर्छ । बिदा बस्दा संक्रमितको उपचार गर्न पाइँदैन भनेर जाँच नै नगराई ड्युटी पूरा गर्‍यौं,’ उनीहरूले अनुभव सुनाए ।
लकडाउन, संक्रमणको ड’रलगायत कारणले धेरैजसो ग’र्भ’व’ती मिति नाघेपछि प्रसूति गर्न अस्पताल आउँछन् । यसले ज’टि’ल’ता ल्याउन थालेको उनले बताइन् । यद्यपि, श’ल्य’क्रि’या गरेर भए पनि आमा र बच्चा दुवैलाई सुरक्षित गर्न सकिएको उनले सुनाइन् ।
यहाँ वैशाखयता २ जना ग’र्भ’व’ती’को मृत्यु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मधु शाहीले समाचार लेख्नुभएको छ ।
प्रकाशित मिति ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०३:४४